भगौडा छापामार र रुखमा चिच्याउने लङ्गुरले रबि लामिछानेलाई पत्रकारिता सिकाउन पर्दैन « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
भगौडा छापामार र रुखमा चिच्याउने लङ्गुरले रबि लामिछानेलाई पत्रकारिता सिकाउन पर्दैन
बिगत केही दिनदेखी शृङ्खलाबद्ध रुपमा अहिलेका चर्चित पत्रकार करोडौं नेपालीले आशा तथा भरोसाको केन्द्रको रुपमा लिईरहेका एक आईडल ‘रबि लामिछाने’ बिरुद्ध केही हरिया झिगाहरु भुनभुनाईरहेको देखेको छु । यि सारा कुरा आँखा अगाडि देख्दा देख्दै चुपो लागेर बस्न मनले मानेन । सागबारिमा अनावश्यक झारलाई उखाल्न सकिएन भने साग सकाईदिन्छ मैले बुझेको छु । झारलाई सकेसम्म जरै बाट निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । त्यसैले केही लेख्न लागिरहेको छु । हुन त मान्छे भए न मेरा भाषा बुझ्लान । ती हरिया झिँगाहरुले खै के बुझ्लान तर पनि मेरो धर्मले चुपो लागेर बस्न दिएन र केही लेख्दैछु । पत्रकारिता के हो पत्रकारको धर्म के हो र पत्रकारिता कति किसिमका हुन्छन ? दिल निशानी मगर र मुकुन्देलाई देशभक्त नेपालिको पहिलो छ । यसको जवाफ हामीलाई सिधै दिनुपर्दैन कुनै पनी मिडियाबाट दिए हुन्छ । अर्को प्रश्न तिमिहरुको मिडियामा कति बर्षको अनुभव छ र तिमिहरुको ब्याकराउण्ड के हो ? तिमिहरुले रबि लामिछानेलाई सिकाउने हैसियत के आधारले छ ? आधार प्रस्तुत गर। यि दुई प्रश्नको गतिलो जवाफ छातीमा हात राखेर दिन सकेको दिन तिमिहरुको मुख आफै बन्द हुनेछ जसरी अहिले तिमिहरु रबि लामिछानेको विरुद्ध बोलिरहेका छौ ।
देश चुतर्फी रुपमा निराशाले घेरिएर अन्धकार तर्फ धकेलिनै लागेको बेला एउटा उज्यालो ज्योतिको रुपमा उदाएको नाम हो रबि लामिछाने । जसलाई तीन करोड नेपालिको साथ छ । दलाली, भ्रष्ट्राचार, घुसखोरी, अनियमितता लगायत सारा समस्या समाधान र सुसाशनको लागी रातदिन खाई नखाई खटेको छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम यो हो भनेर फलोअप गर्ने, पुलिस प्रशासनले गरेको भ्रष्टाचार उदाँगो पार्दिने, देश सिध्याउने धमिराहरुलाई घुस लिदालिदै रंगेहात पक्राउ गर्ने, ठेक्कापट्टामा अनियमितता गर्ने र दादागिरी देखाउने गुण्डा र डनहरुलाई कायनबाचा गराउने, बिदेशमा फसेका, दु:ख पाएका हाम्रा चेलिहरु, हाम्रा दाजुभाईहरुलाई स्वदेश फर्काउन मरिमेटेर लाग्ने लगायत जनता संग सम्बन्धीत हरेक बिषयबस्तुलाई उठाएर निर्मुल पार्न लागीपर्ने यस्ता जोशिला खम्बालाई दलाल र दलाल नेता भनाउँदाको पुछर बनेर हिड्ने दुईचार झुसिल किराले कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेको देख्दा अट्टाहस रुपले हाँसिदिन मन लाग्छ । हरे ! तिमिहरुको खोपडी । एक पटक खोपडी चेक गर राम्रो डक्टर संग गएर डिमागमा गिदी छकी अरुनै केही छ भनेर । रबि लामिछाने दाईले गरेको कुन काम गलत छ ? आफू पनि गर्न नसक्ने अरुले पनी गरेको देखि नसहने ? ऋषि धमलालाई आईडल मान्ने तिमिहरुको हैसियत र योग्यता बुझेकाछौँ हामीले पनी ।
एउटा भगौडा छापामार र रुखमा चडेर लंगुर जस्तो भाषण ठोक्दै हिड्ने लगभग सबैले भन्ने गरेको अर्ध पागल जस्तो मान्छेले गिनिजबुकमा नाम लेखाई सकेको रबि लामिछाने जस्तो पत्रकारलाई पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ । नेपाली त्यति लाटा छैनन पत्रकारिताको धर्म के हो नबुझ्ने । चर्चा पाउनकै लागि जुनसुकै कुकर्म पनि गर्न तयार हुने निशानी र मुकुन्दे जस्तो प्रबृत्ती भएकाहरु मिल्नेथ्यो र चर्चा पाईन्थ्यो भने छाडा तरुनी जस्तै नाङ्गा तिघ्रा देखाएर हिड्न बेर लाउदैनथे हामीले बुझेका छौं । तिमिहरु कस्तो समाज चाहिरहेकाछौ मुकुन्दे र दिलेहरु ? तिमिहरुले आलोचना बाहेक अरु के गर्न जानेका छौ? एउटा त्यस्तो केही सबुद भए पेश गर हिम्मत छ ?? नेपालीहरु सेरिएर मर्न तयार छन । सँधै बिरोधको लागी बिरोध गरेर के गर्न खोजेको ? सक्छौ अफु गरेर देखाउ तर सक्दैनौ भने करोडौ नेपालीको छातीमा बुट बजार्ने काम बन्द गर । नत्र देशभक्त नेपालीहरुले तिमिहरुलाई उसै छोड्ने छैनन चेत रहोस । तिमिहरु जस्तो पानी मरुवाहरु चिच्याएर रबि लामिछानेलाई केही फरक पर्ने छैन । रबि लामिछाने जस्तो देश भक्त पत्रकारलाई तीन करोड नेपालीको साथ छ । ठण्डा दिमागले के बुझिराख भन्दा ‘कुत्ता भुके हजार हात्ती लम्के बजार’ । तिमिहरुको भुकाईले न रबि लामिछाने दाईको बोली बन्द हुने छ न नेपालीले सपोर्ट गर्ननै छाड्ने छन, हेक्का रहोस । जय देश !!!